उम्मेद्वार - खगेन्द्र अधिकारी
खगेन्द्र अधिकारी नेपाली कांग्रेस झापा ५
डा. खगेन्द्र अधिकारीको जन्म २०३१ सालमा गौरादह ५, झापामा भएको हो । त्रिचन्द्र कलेजमा प्राध्यापन गर्दै आएका डा. अधिकारीले टिकट पाउने निश्चित भएलगत्तै कलेजमा राजीनामा बुझाएर राजनीतिमा आउनु भएको हो । साढे १७ वर्षको प्राध्यापन पेशा छाडेर उहाँ पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिस्पर्धी बन्दै झापा ५ बाट उम्मेदवार बन्नु भएको हो । अधिकारीले भारतको सौराष्ट्र युनिभर्सिटीबाट प्राणीशास्त्रमा विद्यावारिधी गर्नु भएको छ । उहाँले कांग्रेसको राजनीतिक यात्रा भने ०४८ सालदेखि नै सुरु गर्नु भएको हो । झापाको गौरादह क्याम्पसमा नेपाल विद्यार्थी संघको इकाई अध्यक्ष हुँदै राजनीति सुरु गरेका अधिकारी २०५७ सालदेखि प्राध्यापन पेशामा हुनुहुन्थ्यो । २०५७ सालमा उहाँ त्रिचन्द्र क्याम्पसमा प्रजातान्त्रिक प्राध्यापक संघको सचिव समेत हुनुभयो । हाल उहाँ कांग्रेसको महासमिति सदस्य हुनुहुन्छ । यसअघि अधिकारी कांग्रेसको अनुसन्धान तथा अभिलेखालय विभागको केन्द्रीय सदस्य समेत बन्नु भएको थियो ।